दिनमा कति कप चिया खानु उपयुक्त ? | Nepali Health
दिनमा कति कप चिया खानु उपयुक्त ?
२०७४ भदौ १० गते ८:२१ मा प्रकाशित
-प्राडा गंगाप्रसाद खरेल
मानव इतिहासमा चिया पानीपछि सबैभन्दा बढी पिइने पेय हो । चिया एक किसिमको वनस्पति ‘कमेलिया साइनेन्सिस्’ को कलिला पात र मुनाबाट बनाइन्छ ।
करिब ५००० वर्षअघि चीनबाट औषधीय पेयको रूपमा चिया पिउने चलन शुरु भएको मानिन्छ । त्यहाँबाट जापान, युरोप हुँदै बेलायतको साम्राज्यसँगै भारतलगायत विश्वका अन्य भूभागमा चियाको खेती र पिउने बानी विस्तार भयो ।
बुद्ध धर्ममा चियालाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ । आज विश्वका ६२ देशमा चियाको व्यावसायिक खेती गरिन्छ । चिया खेती एवम् व्यवसाय लाखौँ जनताको जीवनशैली तथा जीवनयापनको एक अभिन्न साधन भएको छ ।
नेपालमा आजभन्दा करिब १४५ वर्षअघि मेची अञ्चलको इलाम र सोक्तिममा व्यावसायिक चिया खेतीको शुरुआत भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका ज्वाइँ बडा हाकिम गजराजशमशेर थापाले पूर्वी नेपालको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र दार्जिलिङ भ्रमणको क्रममा त्यहाँ लगाइएको चियाको मनोरम दृश्य, स्वाद र आतिथ्यबाट प्रभावित भएर नेपालमा चिया खेतीको प्रारम्भ गरेका थिए ।
चिया उत्पादनसँगै चिया पिउने बानीमा वृद्धि हुन थाल्यो । आज चिया नेपाली खानपान र संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग भएको छ । चिया उत्पादनको हिसाबले नेपाल विश्वको करिब २१औँ स्थानमा पर्छ र आत्मनिर्भर हुँदै विश्व बजारतिर उन्मुख हुँदै आएको छ । चिया संसारभरकै एक प्रमुख पेयको रूपमा स्थापित भएको सन्दर्भमा यसबारे जो कोही उपभोक्ताले पनि सत्य जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।
प्रशोधन विधिअनुसार चिया मुख्यतः तीन किसिमका हुन्छन् । फर्मेन्टेशन नगरी बनाइको ग्रीन टी, आधा फर्मेन्टेशन गरेर बनाएको उलङ टी र पूरै फर्मेन्टेशन गरेर बनाइएको ब्ल्याक टी । जापानमा सानो परिमाणमा प्रत्यक्ष सूर्यको किरण नपुग्ने छहारीभित्र हुर्काइएको चियाको मुनाबाट ‘माच्चा’ टी बनाइन्छ । चियामा पाइने असल गुणका हिसाबमा यो चिया सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ ।
अम्बा, नीम, लालचन, जस्मिनफूल, तुलसा, सिस्नुजस्ता खाद्य वनस्पतिका पात, फूल आदि सुकाएर बनाएका गैरचिया पनि बजारमा पाइन्छ, किन्तु तिनीहरूलाई चियाको परिभाषामा पार्न सकिँदैन ।
जुनसुकै किसिमका चिया, कफी, कोला, इनर्जी ड्रिङ्क पिउँदा दिमागलाई उत्तेजित पार्ने रसायन क्याफिन हो, जसले एक किसिमको आनन्द र ताजापन दिन्छ । यो रसायन कफीमा सबैभन्दा बढी, ग्रीन टीमा सबैभन्दा कम र अरू किसिमका चियामा मध्यम मात्रामा पाइन्छ ।
अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन (फूड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन) का अनुसार एक दिनमा एक जना स्वास्थ्य वयस्क मानिसले ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन लिनुलाई पूर्ण सुरक्षित मात्रा मानिएको छ ।
एक कप कफी, ब्ल्याक र ग्रीन टीमा क्रमशः १००, ५० र ४० मिलिग्राम सरदर क्याफिनको मात्रा मान्दा अधिकतम क्रमशः चार, आठ र १० कपसम्म चिया पिउन सकिन्छ । स्मरण रहोस्, क्याफिनयुक्त पेयसँग मदिरा कदापि पिउनु हुँदैन किनकि क्याफिनले मदिराको मात कम गर्ने भएकाले अधिक मदिरा पिएर प्राणघातक हुन सक्छ ।
चियामा थियामिन नामक एक दुर्लभ किसिमको एमिनो एसिड पाइन्छ, जसले दिमागको कार्य क्षमता बढाउने डोपामिन उत्पादनमा मद्दत गर्छ, जसको कमीले बूढेसकालमा हुने अल्जाइमर रोगको जोखिम बढाउँछ ।
क्याफिनले शरीरको मेटाबोलिजम् बढाउने भएकाले मोटोपन हुनबाट बचाउँछ । चियामा पाइने पोलिफिनोलले एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्छ । जसरी फलामलाई खियाले खतम पार्छ, त्यसरी नै हाम्रो शरीरका तन्तुलाई पनि अक्सिडेसनले कमजोर बनाउँछ ।
त्यसको विरुद्ध चियामा पाइने पोलिफिनोलले एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्ने भएकाले विभिन्न किसिमका क्यान्सर र असामयिक बूढौलीपन आउनबाट बँच्न सकिने तथ्य पत्ता लागेको छ । अरू चियामाभन्दा ग्रिन टीमा क्याफिन कम र पोलिफिनोल बढी पाइने भएकाले यसबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ ।
नियमित रूपमा ग्रिन टी पिउने जापानीलाई मधुमेहको जोखिम अरूको तुलनामा एकतिहाइ कम भएको पाइएको छ । चियामा पाइने पोलिफिलनोलले रगतमा खराब कोलेस्टोरल र ट्राइग्लिस्राइड कम पार्ने क्षमता भएकाले मुटुसम्बन्धी रोगको खतरा घटाउने सक्ने नतिजा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
चियाको पोलिफिनोल र एन्टिअक्सिडेन्टले छालामा विकिरणबाट हुने असर कम गराउछ र आखा स्वास्थ्य राख्न सहयोग गर्छ । यिनीहरूको जीवाणु प्रतिरोधी गुण भएकाले मुख एवम् दाँतलाई स्वास्थ्य रहर समेत मद्दत गर्छ ।
संसारमा यस्तो खाद्यवस्तु छैन, जसले फाइदा मात्र गरोस् । चियाका पनि केही बेफाइदा छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । चिया भोको पेटमा पिएमा चियामा भएको क्याफिनले ग्यास्टिक जुस बढाएर ग्यास्टिक हुने डर हुन्छ । धेरै चिया पिउनाले चियामा भएको टेनिनले हाम्रो शरीरमा आइरन र क्याल्सियमको शोषणमा कुप्रभाव पार्छ र क्रमशः रक्तअल्पता र हड्डी खिइने त्रास बढाउछ ।
व्यक्तिअनुसार क्याफिन बढी भएमा डर, चिन्ता, कम्पन, अनिन्द्रा, मुटुको धड्कन र प्रेसर बढ्ने, बढी पिसाब लाग्ने जस्ता अनेक समस्या देखा पर्न सक्छन् । गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका महिलाले चिया नपिउनु नै बेस हुन्छ । पाच वर्षसम्मका बच्चा क्याफिनसँग सम्वेदनशील हुने भएकाले चिया दिनु हुँदैन । औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीको हकमा डाक्टरको सल्लाह अनुसार चिया पिउनुपर्छ ।
संसारभर चिया बनाउने तरिकामा विविधता पाइन्छ । जापानमा ग्रिन टी र चीनमा उलङ टी पिउने आम प्रचलन छ । यी दुवै किसिमका टीमा दूध र चिनीको प्रयोग गरिँदैन । नेपाल, भारतलगायतका अन्य देशमा सिटिसि दानेदार धुलो चियामा दूध र चिनी दुवै मिसाएर उमाली छानेर पिउने चलन छ तर फाइदाको दृष्टिले यो तरिका ठीक होइन ।
चियामा दूध मिसाउँदा दूधमा रहेको क्यासिनले चियामा रहेको लाभदायी पोलिफिनोलसँग प्रतिक्रिया गरेर संयुक्त यौगिक बन्छ, जुन शरीरमा शोषण हुँदैन ।
कुनै पनि किसिमको चियाबाट अधिकतम फाइदा लिन एक सानो चम्चा चियामा उम्लेको पानी हालेर दुई÷तीन मिनेट छोपेर राखेपछि पिउनुपर्छ । चियामा कागतीको रस वा मह मिसाएर पिउनु पनि स्वस्थकर मानिन्छ ।
खाना खाएको दुई घण्टापछि चिया पिउनु राम्रो बानी हो किनकि यसले क्याल्सियम र आइरन शोषणमा पार्ने प्रभाव न्यून पार्छ । अरू पेय सरह धेरै तातो चिया पिउनाले घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना हुने भएकाले सहज पिउने सक्ने तातोसम्म सेलाएर मात्र चिया पिउनु उत्तम हुन्छ ।
चियालाई स्वाद र आनन्दको रूपमा मात्र नहेरेर स्वस्थवद्र्धक पेयको रूपमा अपनाउनुपर्छ । चियामा दूध मिसाउँदा यसको फाइदा घट्ने भएकाले फिक्का र कम प्रशोधित चिया जस्तै लिफ वा ग्रीन टी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसैले फाइदाको आधारमा क्रमशः ग्रीन, लिफ, उलङ र ब्ल्याक टीलाई लिन सकिन्छ तर इच्छाअनुसार लेमन, चिनी वा मह मिसाएर चिया पिउन सकिन्छ । चिया पूरै इन्कार गर्ने वा अत्यधिक पिउने बानी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन् । तसर्थ उपयुक्त मात्रा, तरिका र समयमा चिया पिउँदा स्वास्थ्यलाभ गर्न अवश्य सकिन्छ ।
तराईका दलित बस्तीमा बाढी पीडितको उपचार गर्दै डा. केसी